Kungani Inkampani Yakho Ingazange Isebenzise i-CMS? | Martech Zone
Kungani Inkampani Yakho Ingazange Isebenzise i-CMS?
NgoMgqibelo, Okthoba 17, 2009 NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020 Douglas Karr
Kunengxoxo eningi kule bhulogi mayelana nokwenza kahle, ukuguqulwa kokuguqulwa, ukumaketha okungenayo, ukusebenziseka kwenjini yokusesha… ngisho ukuhlolwa kwe-multivariate nokusebenza kwekhasi lokufika. Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi amasayithi amaningi asekhona ngawo-1990 futhi anamakhasi e-HTML anekhodi eqinile ahlala engashintshiwe kuseva!
Ngangena ngemvume nge-FTP, ngalanda ifayela futhi ngenza ukuhlela okudingekayo nge-Dreamweaver. Ngibe sengifundisa ukuthi wonke lo msebenzi ubungadingekile. Elinye ikhasimende lakamuva lithumele umakethi wabo ekuqeqeshweni kwe-HTML ukuze bavuselele isiza sabo. Lokhu bekungadingeki futhi. Ngenkathi ulwazi lobuchwepheshe bewebhu lusiza, uhlelo oluhle lokulawulwa kokuqukethwe lunganikeza inkampani yakho wonke amathuluzi adingekayo ukugcina isayithi lakho livuselelwa nsuku zonke ngenkathi kususwa izithiyo zemfundo nezobuchwepheshe.
Ngezindleko zamakilasi noma izinkokhelo eziqhubekayo zoku umfana wewebhu, lezi zinkampani bezingasebenzisa uhlelo oluqinile lokulawulwa kokuqukethwe ezingakulawula.
Kwelinye lamakhasimende anjalo, iPhepha-Lite, a umhlinzeki wohlelo lokuphathwa kwemibhalo, sisebenzise i-WordPress. Kunezinye izixazululo eziningi zokuphatha okuqukethwe emakethe, kepha lena ibinazo zonke izinsimbi namakhwela futhi ibizivumelanisa kalula nezidingo zekhasimende.
Cishe bonke ababhalisi besizinda manje banikela ngohlelo lwabo lokuphathwa kokuqukethwe noma ukufakwa ngokuzenzakalela kwezinye izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe. Iseluleko sami kuphela kungaba ukunamathela kungxenyekazi enokwamukelwa okubanzi nomphakathi omkhulu wentuthuko nayo.
Khumbula ukuthi ukufaka i-CMS yamahhala akukhululekile, noma kunjalo. Ukulungiswa kwesondlo kuyadingeka! Ukuba ngumfana omkhulu kubhulokhi lamahhala le-CMS nakho kuyaboleka ezigebengwini eziningi ezizama Hack yesikhulumi sakho. I-CMS yamahhala ebanjelwe kwipulatifomu yokubamba eshibhile nayo ngeke imelane nethrafikhi - edinga ukuthi ukwenze qinisa ingqalasizinda yakho.
Izinzuzo zidlula izingozi uma unendoda enhle ukuze ugcine i-CMS yakho iphilile, noma kunjalo. Kanye nokufaka nokulungisa i-CMS:
Senze emuva emuva ukulungiselelwa kwezinjini zokusesha ngama-plugins alungile nokufomatha itimu.
We egcizelele ikhasi lokungena ngemvume ukuze amakhasimende abo akwazi ngena ngemvume ubone okuqukethwe okuvinjelwe.
Silungiselele futhi salungisa i-a quote plugin ukushintshanisa izingcaphuno zamakhasimende onyaweni lwekhasi lasekhaya.
Sathenga safaka ifayela le- isixazululo sefomu eliqinile ukuze bakwazi ukuthwebula imikhondo yokumaketha kwangaphakathi.
Sivuselele ifayela le-htaccess ukuqondisa kabusha izixhumanisi ezindala ezindleleni ezintsha kokuqukethwe okufanayo. Siphinde safaka i- ukuqondisa kabusha i-plugin ukuphatha ezinye izidingo zokuqondisa kabusha. Lokhu kuvame ukuba yisinyathelo esinganakwa ngabaklami bewebhu futhi kungabulala ukusebenza kwakho kahle. Qiniseka ukuthi izixhumanisi zakho ezindala zisasebenza… vele uzikhombe kokuqukethwe okusha!
Sifake izingqikithi nama-plugins ukuze isayithi linikeze ngokuphelele I-iPhone, i-iPod touch namanye amadivayisi eselula. Abantu basebenzisa amadivayisi eselula ukubhekabheka amasayithi ngokungaphezulu… isayithi lakho liyafundeka yini kulawa madivayisi?
Silungiselele izinkwa zokudla ezingxenyeni zesayithi ezinokuzulazula okujulile ukuze amakhasimende akwazi ukuzulazula kalula.
Vele, silungiselele ama-Webmasters, ama-Stats plugins, nama-Analytics futhi ukuze inkampani ikwazi ukuqapha ithrafikhi yayo.
Mhlawumbe okubaluleke kakhulu, siyaqhubeka nokusiza inkampani ukuthi yamukele kupulatifomu entsha futhi iyisebenzise ngempumelelo. I-CMS efana ne-WordPress ingaba nzima ekuqaleni. Ngiyakuqinisekisa ukuthi kulula kakhulu kunokuchaza i-FTP ne-HTML, noma kunjalo!
Okokugcina, yize i-WordPress iyipulatifomu efanelekile yokubhuloga, ngikholelwa ngobuqotho ukuthi uhlelo lokuphatha okuqukethwe kwewebhusayithi olungcono kakhulu. Kukhona isoftware njengezixazululo zensiza ezifana Indlela yemakethe ezinikeza ukuphathwa kwesayithi, ukubhuloga, kanye ne-ecommerce.
Tags: CMSukuphathwa kokuqukethweuhlelo lokuphatha okuqukethweUkukhangisa Okuqukethwe
Okthoba 21, 2009 ngo-12: 42 AM
Kushiwo kahle, uDoug.
Ngenkathi ngike ngaba nokuhlangenwe nakho okufanayo nabaninimabhizinisi abaningi bekwenza ngendlela okwenziwe ngayo ngekhulu leminyaka elidlule, lokhu kuyiqiniso futhi:
"I-CMS efana ne-WordPress ingaba nzima ekuqaleni."
Abanini bamabhizinisi amancane, ikakhulukazi, bathola umsebenzi omningi we-CMS. Kuningi kakhulu okufanele ukukhumbule uma umatasa uqhuba ibhizinisi lakho futhi uthumela okuthile okusha ngezikhathi ezithile. Ngesikhathi uthola ukusebenzisa i-CMS futhi, usukhohliwe ukuthi ungayenza kanjani. Futhi ngubani ofuna ukufunda ibhukwana?
I-WordPress impela ingcono kakhulu kune-Joomla noma i-Drupal ngokuya ngokusebenziseka okujwayelekile kokulawulwa. Ukuhamba komsebenzi kunembile uma kuqhathaniswa nezinye ezimbili.
Kube yini isipiliyoni sakho ngama-CMS wabaninimabhizinisi abancane? Uke wazama ezinye izindlela "ezilula"?